Ugu yaraan labo qof oo ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacaay Laascaanood - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan labo qof oo ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacaay Laascaanood
June 28, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Magaalada Laascaaoond ee xarunta gobolka Sool. (Sawirka: Puntland Mirror)
Laascaanood -(Puntland Mirror) Ugu yaraan labo qof ayaa ku dhimatay shan kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal beeleed ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool maanta oo Talaado ah, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Dagaalka ayaa ka bilaabmay gudaha magaalada subaxnimadii hore ee saakay, sida ay ku warameen dadka deegaanka.
“Dagaalka wuxuu qarxay subaxnimadii hore ee saakay wuxuuna sababay in la xiro dhamaan meheradihii ganacsiga,” qof dadka deegaanka ah ayaa sidaa u sheegay warsidaha Puntland Mirror.
Dagaalkan ayaa daba socda dagaal beeleedyo culus oo asbuucyadii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka Sool, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof.
Laascaanood waa magaalo ay ku muransanyihiin dowladaha Somaliland iyo Puntland. Ciidamada Somaliland ayaa magaalada ka qabsaday Puntland bishii Oktoobar sanadkii 2007.